Gabayo isu jawaab ah
Camanje, Geelle, Beenaleey, Maax, Cali-dhuux:
Sida la wariyey, niman Isaaq ah ayaa Xuseen Yogol Furre oo ku magac dheeraa Camanje ku eedeeyey inuu neef geel ah ka dhacay. Camanje eedayntaa kama garaabin. Noo dhaaro in aadan arag ayey nimankii Isaaq ku dacwiyeen. Camanje oo aad ula yaabban nimankii ayaa yidhi waan idiin dhaaranayaa ee ii imaadda. Way u yimaaddeen si uu kitaab Jaamac ah baallaha u jaro. Iyagoo gole fadhiya oo ka sugaya inuu dhaarto ayuu gabay aan ka hayno halalkan hoose u tiriyey. Wuxuu yidhi:
Nimanyahow hashiinii ma arag, waana la hubaaye
Waa taan hudheelaha galaa, hogoga Iidoore
Waa taan hariirsade gubaa, dhuxuli hoos taale
Haweenkaygu waateey midgaha, hilib ka iibshaane
Gabaygaa ayaa carro Isaaq la geeyey, hase yeeshee sidii Camanje jeclaa oo ahayd in ay durba niman gabyaayi kasoo jawaabaan ma dhicin. Muddo kolkuu sugay ayuu Camanje is hayn waayey oo uu gabay kii hore la sar ah ka daba diray. Isagoo Jigjiga jooga ayuu gabay sidii gantaalkii tuuray. Wuxuu ku rusheeyey Hargaysa oo uu ku tuhmayey rag door ah oo gabya. Wuxuu yidhi inta nasoo gaadhay:
Gabay haw yidhaadoo ku dhaca, Cadan hagaageeda
Oo hammug yidhaa oo Isaaq, daartii wada heensha
Oo halaha kii raaci jiray, kaga hayaay siiya
Oo kii hudheellada lahaa, ka handaraafsiiya
Oo kii hargaha iibsan jiray, haaro ugu yeela
Oo kii hablaha dooni jiray, horay usii tuura
Oo hilibka kii qaadi jiray, kaga habaaseeya
Oo dhariga kii heemin jiray, heenka kaga daadsha…
Haabhaaban maayee anuu, hilinka ii yaalo...
Hadduu aar hal dilo oo dhurwaa, hilib usoo doonto
Hungurina ka geyn waa kalyana, kuma hagaajaane
Huuhdooda unbaan maqliye lay, hor iman maayo
Cali Geele nin la odhan jiray ayaa haddaba isagoo laabta ku haya haybta ay wadaagaan Abasguul iyo Ogaadeen tiriyey gabay uu Abasguul ku quudhsaday Ogaadeena leeyahay aanada u dhinta. Duurjoogta kala duwan kalana darajada roon, geela, maraakiibta, ganacsiga makhaayadaha iwm ayuu hordhaca gabaygiisa tusaale ahaan usoo qaatay isagoo ciddii aan isaga ahayn, Ogaadeen iyo Isaaqba, ee gabaydaa inay gef ku tahay ku faanay. Intaa ka dibna ujeedadii gabaygiisa oo ahayd inuu Ogaadeen weeraro ayuu u gondodegay. Xoolaha agoonta oo ay dhacaan xalaalaysteenna iyo caydhnimo badan oo ku kaliftay midhaysi iyo ugaadhsiba ayuu ku sheegay. Hartiga oo ay isku abtir yihiin, Mareexaan oo ay ka guursadaan, iyo Majeerteenka xeebta Eyl ku dhaqan oo ay inan ka doontaan ayuu ku duray. Wuxuu yidhi:
Abasguul Isaaq inaan la simo, igama eegtaane
Aanada rag kale ha u dhintee, eray yar baan baanay
Hadday ayra geel kuu dhashood, waaya badan eegto
Uumiga kaliileed hadday, aammineey curato
Oo ibaha naasaha la jaro, waa af-kala-qaade
Markabkuba alleyl dhacay hadduu, shooladda afuufo
England iyo Wales buu maraa, toban ayaamoodee
Kol haddii Injiinku u fakado, waa af-kala-qaade
Nin maqaaxi iibsadey haddii, loogu iman waayo
Goortii albaabada la xidho, waa af-kala-qaade
Afar boqol ka badan maansadaan, uurka ku hayaaye
Isaaq iyo Ogaadeen haddii, laysu soo urursho
Ninka aniga ma ahee gabyaa, waa af-kala-qaade
Awr badan waraabuhu hadduu, waa ajale laayo
Ma uu aamusnaado ee kolkuu, uubatada qaado
Kolka aarka weyni u yimaad, waa af-kala-qaade
Waa taan Ogaadeen noqdaa, aharta diidaaye
Waa taan agoon xooleheed, ku intifaacaaye
Waa taan adduunkoon la dhicin, ka aradnaadaaye
Waa taan sidii yey anbaday, ilo ka yeedhaaye
Waa taan awaaraha miskaha, dib ugu aastaaye
Waa taan in goon ah iyo habaas, kala afuufaaye
Waa taan bir wada aad ah iyo, gudun afaystaaye
Waa taan Absame Kuumadiyo, ehelkii sheegtaaye
Abtirsiimo waa taan Hartiga, uga ekaadaaye
Ubadkayga waa tay siddaa, arad Mareexaane
Waa taan Majeerteenka Eyl, inan ka doonaaye
Cali Geele markii uu Ogaadeen oo aan sheekadaba lug ku lahayn gabaygiisii ku xusay ayaa Camanje fariin soo faray. Wuxuu yidhi “Ogaadeenow nimankii Isaaq way iga baqeen ama way i balfeene bal isku daya idinku?”
Maxamuud Cali Beenaleey ayaa u jawaabay Cali Geele. Khaa’in iyo saanac midna in uusan ahayn, Muslimiinta iyo dadka ay macrifada yihiin inuu waajibkooda mariyo ogyahayna inuu barri mudan doono ka maanta isaga mutay, gardaro inuusan cid waligii ku maagin, wacad iyo dhaar laysu maray in aanu ka bixin, isaga oo ujeedadiisu tahay sida Cali Geelle iyo talkii, ayuu hordhac ka dhigtay Maxamuud. Wuxuu dabadeed u dhaadhacay ujeedadiisii oo uu Cali Geelle tolkii ku sifeeyey hilible, hilibka xaabkiisa uun ku nool, caydh ah, oo kalluunka kuwa fara madow ee aan bar xoolaad ka nixin mooyee aan cid kale isku lurin ku nool ah. Waxaa kale oo ku dhalliilay inay gabdhahooda iibiyaan oo ay ammaan iyo magacyo kala duwan huwiyaan si ay ugu daraan nin aan wax damac ahi ka haynin. Wuxuu ku xidhay dhaliilihii uu ujeedinayey Cali Geelle iyo Isaaqba tii ugu xumayd oo wuxuu ku sheegay in nimankaa gaalku ka muraadsado. Wuxuu yidhi:
Marna in aanan maakhado ahayn, maanac iyo saanac
Muslinkaba in aanaan u darrayn, laysna mudan doono
Dadka nimaan manaabo iga qabin, in aanan maagaynin
Oo aanan musheekhdiyo nebcayn, nimaan macruufownay
Oo aanan kitaab laysu maray, meersan wacadkiisa
Waa taan makhnuud iyo noqdaa, mukhawad Iidoore
Waa taan maqaamkii hunguri, ugu madiixaaye
Waa taan miscilil baas dhigtaa, aan marimo ootaaye
Waa taan mallooliga cayilay, macasha jiidaaye
Waa taan muluca kala soo baxaa, moolka badahiiye
Waa taad i mooddaa dhurwaa, maraya dow dheere
Waa taan nin aan maagganayn, maro u saaraaye
Waa taan Maryamo-luuli iyo, magacyo sheegaaye
Waa tii saliid la i marshaa, maalin iyo leylee
Waa tii Maxooliga Kufrigu, igu maraacshaaye
Waxaa soo galay Maax Dhagoole. Maax wuxuu ahaa reer Dhagaxbuur, xilligii uu noolaa wuxuu ku jiray ragga qabyaaladda ka gabya kuwooda ugu afdheer. Sida dadka qaarkii wariyey, wuxuu soo gaadhay qarnigii tagay billowgiisii ilaa badhtamihiisiiba,.
Maax wuxuu gabaygu aad ugu bixi jiray kolka ay laba qoys maansada isku hardido. Wuxuu seeftiisa galka kala bixi jiray, gaar ahaan, marka Isaaq gabay laga keeno oo isla xilliga uu maqlaba jawaab ka celin jiray. Wuxuu odhan jiray Absame aniga faraha ha iiga qaado nimankaa Isaaq oo yaan cid aan ani ahayniba u gabyin. Saddexdii gabay ee Camanje, Cali Geele, iyo Maxamuud Cali isdhaafsadeen ayaa loo geeyay Maax. Wuxuu ku darsaday gabay aan ka hayno:
Irriduu yaxoobaa sidii, ood fadhiisin ahee
Uurtuu ka reemaa sidii, igadh cayuumeede
Ilmahana galabtuu iman, aabbihii dhalaye
Cali Geelle gabaygiisii wuxuu ku xusay magaca Harti isagoo Ogaadeen ku leh isku abtir ayaad nimankaa tihiin. Wuxuu kaloo tixraacay qisadii Halac Dheere/Haameey oo uu gabayga mariyey Majeerteenka Eyl. Cali-dhuux Aadan Goroyo ayaa labadaa arimood ka faa’iidaystay oo tiriyey meerisyadan hoose. Hunguri xumo, xishood darro, qorqodenimo iyo cadadka hilibka ee ay Soomaalidu ka faanto inay ka laacaan ayuu ku ceebiyey nimankii ay ishayeen ee Cali Geelle uun aan gabaygiisa ka soo xusnay. Inta aanu hellay Cali-dhuux wuxuu yidhi:
Waa taan wan weyn dhinacii iyo, dhabarkii tuujaaye
Waa taan intaan kala dhigdhigo, dheriga heenshaaye
Waa taan middii ii dhexdayoo, dhowri kariyaaye
Waa taan in soo dhibicsadaa, dhaahiyaha fuud e
Waa taan fartaa dhuuban iyo, dhuraha leefaaye
Dhab calool ah waa taan wadniyo, dhabano iibshaaye
Waa taan dharkaygii xarago, dharas ku laabtaaye
Silsiladan oo isu rogtay mid ay gabayaagii Daarood iyo Isaaq ku loolameen waxaa ka qayb qaatay rag kale oo waheliyey shantaa nin ee kore. Tixaha aanu halkan ku xusnay qudhooda waxaa la arkaa inaysan dhammayn. Soo raadi waxa maqan.
 Laba cajaladood oo midna Cabdullaahi Dhoodaan duubay midda kalena Yuusuf Colaad duubay ayaan ka saxay. (2003 iyo 2004)
 Ogaadeen, Reer Isaaq, Reer Cali
 Manaabo waa dakano, waa tii Maxamed Cumar Dage isna gabayga ku lahaa; gabaygaan manaabada lahaa, maqan ku raadcayso
 Mukhawad: eray asalkiisu Af-Carabi yahay oo la macno ah khaniis
 Macanjilaysi: shaxaadka ama baryada reer magaalka
 Madiix: eray asalkiisu Af-Carabi yahay oo la macna ah ammaan
 Xubno hilibka ka mid ah oo ragga Soomaalidu ka faano calfashadooda, ninkii lagu arko ama lagu tuhmo quudashadoodana lagu ceebiyo. Sharci ahaan xubnahaasi hilibka kale waxba kagama duwana oo waa xalaal
 Dabato ama ugaadhsiga duurjoogta ayuu ula jeedaa beydkaa
 Ogaadeen, Reer Isaaq, Reer Cali. Cabdullaahi Dhoodaan cajalad uu duubay ayaan ka saxay. (2004)